Chii chinonzi tablet? Tablet kana laptop? Ibva mukukahadzika
Zviri pachena kuti, iye zvino, mapiritsi ari mufashoni, zvisinei hazvo vamwe venyu vachiri kuedza kufunga kuti chii chingaitwa nehwendefa. Zvakanaka, unogona kumira kushamisika kuti sei Muchinyorwa chanhasi tinokuudza kuti piritsi ndeyei, kugoverana newe gumi ekushandisa kwayo kwakanyanya. Mamwe mashandisirwo anoshandira ese ari maviri e iPad, Android kana Windows zvishandiso.
Chokwadi ndechekuti nemapiritsi akachipa unogona kuita zvese izvi. Zvinyorwa zvedu semuenzaniso:
Mapiritsi atinokurudzira zvakanyanya.
Ndeipi piritsi yekutenga
Yakanakisa mutengo-mhando piritsi
1 Chii chinonzi tablet
2 Ndezvipi zvakanakira kuva nehwendefa?
3 Ndeapi mashandisiro atinogona kupa piritsi?
3.1 Ye graphic design
3.2 Kuona mafirimu kana series
3.5 Ita vhidhiyo kufona uye misangano
3.6 Dzora komputa yako uri kure
3.7 Dzidza mitauro
3.9 Kutsvaga Indaneti
3.10 Sechipiri chinobatsira chidzitiro
3.11 A universal remote control
3.12 Iyo "All-in-One" eReader
3.13 Chishandiso chekunyora manotsi
3.14 Chishandiso chekugadzira
3.15 Desk rakasanganiswa remota
3.16 Mutambo unotakurika uye media centre
3.17 Iyo inozivikanwa "yezvose" mudziyo
3.18 pasocial network
3.19 Chishandiso chebasa chisina kuvhiringidza
4 Pane piritsi yerudzi rwese rwemushandisi
4.1 Kune vana
4.2 Kune vadzidzi
4.3 Mapiritsi ehunyanzvi
5 Musiyano pakati petablet nelaptop
6 Mhedziso, tablet ndeyei?
Chii chinonzi tablet
Tafura inharembozha nekuda kwehukuru hwayo iyo, pakutanga, ingori kuratidza uye zvikamu zvemukati. Ivo havawanzo kuve nekhibhodi, saka iyo skrini ndeye kubata. Ivo vanowanzove vane mashoma madoko, akadai sekuchaja, mahedhifoni uye pamwe vhidhiyo inobuda (kana isingaenderane neyekuchaja) uye mashoma kana asina mabhatani. Zvese zviitiko zvinoitika pachiratidziri, kunyangwe ichokwadi zvakare kuti mamwe anosanganisira yekubuda kiibhodhi kana iwe unogona kuwedzera Bluetooth yekuwedzera.
Kunyange zvazvo pakutanga vaizivikanwa se "Tablet PC", chaizvoizvo havana zvakawanda zvokuita nemakombiyuta. Zvinotsanangurwa zvaro zvakanyanya kungwara, izvo zvinosanganisira shoma RAM uye hard disk kupfuura akawanda malaptops, asi iwo anokwana kufambisa nhare yekushandisa system senge. iOS uye Android. Vamwe vavo vanoshandisa Windows, asi izvi zvakanyanya mahwendefa anoshandurwa kana mahybrids pane mahwendefa ari nyore.
Izvo zviri pachena ndezvekuti mahwendefa zvishoma nezvishoma akatsiva makomputa mudzimba zhinji umo maive nekombuta imwe chete yemabasa ekutanga sekuona YouTube, kuverenga online press, kutarisa email nezvimwe zvishoma. Pakupedzisira, mabasa ese aya anoitwa nenzira yakagadzika uye inoshanda kuburikidza nehwendefa uye zvakare nekuda kwezviuru zvemaapplication, tinogona kuita chero chinhu navo.
Ndezvipi zvakanakira kuva nehwendefa?
Piritsi rakagadzirirwa rudzi rwekushandisa, saka kuva nechero kune zvakwakanakira:
Mwanakomana zviduku uye zvishoma kupfuura zvinyorwa. Kana chatinoda chiri chekudya zvirimo, sekuona mavhidhiyo, kugovera pasocial network kana kuverenga, chatinofarira itablet. Tinogona kuisiya chero kupi, kuifambisa hakudhure uye saizi yayo yakakura kupfuura iyo ye smartphone, saka zvirimo zvinozoonekwa pamasikirini ari pakati pe7 ″ ne13 ″ (zvichida zvimwe).
Tinogona kushandisa nharembozha dzimwe nguva dzakasununguka uye dzakasimba pane kushandisa mapurogiramu emakombuta. Kuve tactile, inenge inogara yakagadzikana yekusavimba negonzo kana touchpad.
Tine mazana emitambo inonakidza inowanikwa yakanyatsogadzirirwa kubata zvikirini.
Tinogona kuzvishandisa chero kupi nekuzvibatanidza kune terevhizheni zviri nyore, izvo zvinotitendera kuona nharembozha paterevhizheni.
Sezvo inogara yakabatika uye yakamirira, kutarisa zvinhu zvakaita setsamba kana kubvunza zvimwe zviri nyore pahwendefa pane paPC.
Bhatiri rinowanzotora nguva yakareba kupfuura iyo yemakomputa mazhinji, mamwe anopfuura maawa gumi nemaviri.
Pamusoro pezviri pamusoro, tinokusiya nemamwe mashandisiro aunogona kupa piritsi:
Ndeipi piritsi yekutenga?
Ndeapi mashandisiro atinogona kupa piritsi?
Ye graphic design
Kana iwe uri muimbi, mugadziri, mugadziri wemifananidzo, zvirokwazvo tablet inogona kukubatsira mubasa rako. Kutenda kwavari iwe uchave nemudziyo unozokupa hukuru hwekufambisa kwekugadzira kwese kwaunoda, pamwe nekushandisa peni yedhijitari kuendesa zvidhori zvako kufomati yedhijitari kuti uzvibatanidze gare gare, uzvipe hupenyu, uzvishandure ku3D, etc.
Uye zvakare, mamwe mahwendefa zvakare anobvumidza iwe kuti ubatanidze kuPC uye ushandiswe sedhijitari piritsi, izvo zvinokutendera iwe kuti uve nezvivakwa zvakawanda kana zvasvika retouch kana digitize mifananidzo.
Inogona kunge iri mhinduro yakanaka kana uine vadiki kumba vanoda kudhirowa pabepa, kuitira kuti vape rusununguko kufungidziro yavo pasina kupenda pavasingafanire kana kusiya makrayoni akawanda, mapepa, nezvimwewo, akapararira mumba.
Wona mahwendefa ekudhirowa uye graphic dhizaini
Kuona mafirimu kana series
Kana iwe uine piritsi ine skrini yehukuru hwakakodzera, iwe unogona zvakare kuiona sechinhu chinotakurika kuti uone chako Favorite mafirimu, akatevedzana, mitambo, kana anoratidza nekuyerera. Nekuva nesaizi yescreen yakakura kupfuura nharembozha, ichave yakasununguka zvakanyanya. Uye vanogona kunge vakanaka pakutamba mitambo yemavhidhiyo kana kuverenga ebooks.
Tarisa mahwendefa kuti uone mafirimu
Ehe, kungofanana ne-smartphone zvave zvave hofisi muhomwe yako, piritsi racho rinogona kuva nemaitiro akafanana, asi nepamusoro pekrini uye kushanda, izvo zvinopa zvakawanda zvakanakira. Nyanzvi dzakawanda uye vadzidzi vakasarudza kusarudza piritsi pane laptop, sezvo inovandudza kufamba uye kuzvimiririra, uye vanogona kuita chinhu chimwe chete.
Parizvino, ese mafoni ekushandisa masisitimu ane mazana emaapplication emarudzi ese emabasa akasiyana, kuwedzera kune office suite seMicrosoft Office pachayo, Google Docs, LibreOffice, Polaris Hofisi, SmartOffice, WPS Hofisi, nezvimwe.
Ona mapiritsi kuti ashande
Eheka, vadzidzi Vanogona zvakare kuve nemudziyo mukuru wezvidzidzo zvavo, vangave vana vezera rechikoro (yepuraimari kana sekondari), kana vadzidzi vekuyunivhesiti, nezvimwe. Iyo piritsi haingopi kufamba kuri nani pane laptop, asi inogona zvakare kushandiswa kutora manotsi, kurekodha makirasi kuti utarise gare gare uye kuongorora, pamwe nekuva nemaapuro akawanda ekudzidza.
Iwe unogona zvakare kushandisa iyo karenda kana hurongwa kuti usakanganwa chero chinhu, isa mabasa ako uye zvinyorwa kune gore kuti urege kurasika, govana nevamwe vaunodzidza navo, shandisa vhidhiyo yekufona zviwanikwa zvemakirasi anodyidzana, kushandira pamwe nematurusi ari mugore, zvishandise nepeni yedhijitari kutora zvikeche, dhayagiramu. kana manotsi nemaoko uye kuadhijita, nezvimwe. Mikana yakakwira zvakanyanya ...
Ona mahwendefa evadzidzi
Ita vhidhiyo kufona uye misangano
Mazuva ano, neteleworking, zvidzidzo zviri kure, kana vadiwa vari kure, mudziyo unoshanda unodiwawo kugadzira. mavhidhiyo ekufona uye misangano yepamhepo. Sezvaunogona kuzviita ne-smartphone, iwe unogona zvakare kuzviita nehwendefa, sezvo ivo vachibatanidzawo kamera, mutauri uye maikorofoni. Nekugona kwekushandisa mahedhifoni eBluetooth kana uchida, uye nescreen hombe kuti unyatsoona vhidhiyo inofambiswa nemaapps akadai seZoom, Skype, Sangana, nezvimwe.
Ona mahwendefa ane kamera yakanaka
Dzora komputa yako uri kure
Nharembozha dzinogona kushandiswawo kuita kudzora zvimwe midziyo, kungave kuburikidza nevabatsiri vakadai seSiri, kana Google Mubatsiri, kudzora huwandu hwemidziyo inoenderana nepamba, pamwe nekudzora Smart TV yako uchishandisa piritsi rako seBluetooth kure kure, kana zvakare PC yako. Iyo yekupedzisira inogona kubatwa uchishandisa SSH mapurogiramu kana kutonga kuburikidza neWiFi, Bluetooth, NFC, nezvimwe.
Tafura inogona kuva chinhu chikuru chekushandisa dzidza mitauro, kwete chete nehuwandu hukuru hwezvishandiso zviripo zveizvi, seDuolingo, Babble, ABA Chirungu, Tongo, nezvimwe. Nekuda kwekudyidzana kwezvishandiso izvi, unogona kuverenga zvinyorwa mune mimwe mitauro, kunakidzwa nemakadhi akangwara ekurangarira mazwi, kuteerera mataurirwo, kushandisa maikorofoni kudzidzira mataurirwo ako, nezvimwe.
Mukuwedzera, iwe unogona zvakare kubatana uye kuwana akawanda e online resourcessenge mapeji ewebhu ekudzidza mitauro, kutepfenyura mavhidhiyo mune mimwe mitauro ine zvinyorwa zvidiki, nziyo, nezvimwe.
IP68 IP69K Tablet...
Kana zvinosanganisira GPS, iwe unogona zvakare kuishandisa senzvimbo uye mudziyo wekufambisa. Pamwe yakabatana neWiFi yako, kune network yemotokari dzakabatana, kana kune SIM data. Nakidzwa neGoogle Mepu uye maapplication akafanana kuti usamborasika uye gara uchienda kwaunoda, kumaka nzira dzako dzekukwira, tora mafoto uye geolocate, nezvimwe.
Ona mahwendefa ane GPS
Mahwendefa ane mukana we batanidza neInternet kuburikidza neWiFi. Zvimwe zvinosanganisirawo mukana wekushandisa SIM kadhi ine nhamba yakabatana kuti uve nedata yekubatanidza kwese kwaunoenda, sekunge nharembozha. Bhurawuza mawebhu, dhawunirodha kana kurodha zvemukati, nakidzwa nekutenderera, tonga maemail ako, nezvimwe.
Uye kwete izvozvo chete, iwe unogona zvakare kushandura piritsi rako kuita modem kana yakagadziridzwa yekubatanidza nzvimbo, kubatanidza imwe mudziyo kwairi (tethering), sePC, uye kuti zvakare inowana iyo Internet yekubatanidza kuburikidza nehwendefa rako ...
Sechipiri chinobatsira chidzitiro
Takatanga kuona kuti chii chingaitwa netablet. Chokwadi iwe unoshanda zvakanyanya nekombuta yako uye piritsi rinogona kunyatso shandiswa seyechipiri skrini kuti iwedzere mikana yayo, kungave nekuibatanidza yakananga kuPC seyechipiri chekutarisa kana nekunyatso kuishandisa sepiritsi.
Iine akati wandei ekushanda maapplication uye mamwe mapfupi, unogona kushandisa iyo piritsi sechishandiso chechipiri chezvakanyanya kugadzira izvo zvichakubatsira kuti urambe uchiziva email yako, zvinyorwa zvako kana chero mamwe mabasa ane chekuita nebasa rako raunoda kuti urambe uchitevera.
Chii chimwe chinonzi tablet? Zvakanaka, kunyangwe foni yako ichigona kudzora zvinhu zvakawanda, saizi yehwendefa inozviita kure kure kudzora chero chinhu.
ari Samsung mahwendefa vanozivikanwa nechinhu ichi.
Nekudhaunirodha maapplication akakodzera, unogona kushandisa piritsi rako kudzora uri kure komputa yako, midziyo yemubhaisikopo yepamba, magirobhu emwenje kana kunyange imba yako.
Iyo "All-in-One" eReader
Chokwadi wakambozvifungidzira asi izvi hazvichinje kuti iyi ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekushandisa piritsi. Nekuda kwezvishandiso zvakaita seNewsstand yeIOS kana Google Play Magazines, Kindle, vaverengi vebhuku remakomiki kana "verenga gare gare" zvishandiso zvakaita sePocket, zvingangoita. unogona kusanganisa kuverenga kwako kwese (mabhuku, magazini, mapepanhau kana makomiki) mune imwechete, uye inotakurika, mudziyo..
Ona mahwendefa ekuverenga
Chishandiso chekunyora manotsi
ari mapiritsi evadzidzi akanakira manotsi kana kana uchifanira kutora akawanda manotsi kubasa), piritsi rinogona kunyatso kushanduka kuita mudziyo unotonhorera wekutora manotsi. Une toni yemienzaniso yemashandisirwo etablet muchikoro, izvi zvinosanganisira zvese kubva pakugadzira zvirevo mumabhuku uye zvinyorwa kusvika pakunyora manotsi kana equations "neruoko", kusvika pakudzikisa zvakanyanya kuwanda kwemurwi wako mukuru wemabhuku. Nemashandisirwo akaita Evernote, Drafts kana OneNoteavailable, mikana yacho haiperi, hapana chikonzero chekuenzanisa nezvawaigona kuita nezvaunonyora papepa.
Ona mahwendefa ekunyora
Iwo echinyakare anogona kuseka mukana wekugadzira hunyanzvi nemapiritsi edhijitari, asi zvishandiso izvi zvinokutendera kuti uite zvinhu zvakawanda izvo pabepa zvingave zvisingaite zvachose kuita, kunyanya kana usina mari yakawandisa.
Ingave yekugadzira mimhanzi, kupenda kwedhijitari kana kunyora kwekugadzira, piritsi inokupa kutakurika, nyore kushandisa uye kugona kukopa uye kugovera basa rako nekukurumidza uye nyore. Inogona kunge isiri yako yemazuva ese studio, asi chishandiso chikuru chaunogona kuita chero chekugadzira.
Desk rakasanganiswa remota
Unoramba uchinetseka kuti tablet ndeyei? Zvakanaka, heino kumwe kushandiswa: Wakamboshandisa zvigadziriso zvekufambisa kana mimhanzi inoridza yakavakirwa mumotokari zhinji? Vazhinji vavo vanosiya zvakawanda kuti zvidiwe (zvakanaka ngatitarisei, vanoyamwa). Wadii kubatanidza iPad yako kana Android piritsi mumotokari panzvimbo?
Iwe uchave uine mimhanzi, browser, iri nyore kushandisa uye unogona kutoidzora nezwi rako. Isu takaona isingaverengeki mienzaniso yeizvi, ingave ari ega DIY setups kana mamwe hunyanzvi akavakirwa-mukati setups. Chero chipi chaunosarudza, une chokwadi chekutora mota yako muzana remakore rechiXNUMX.
Mutambo unotakurika uye media centre
Fungidzira hunyanzvi hwekuva neimba yemitambo inokodzera mubhegi rako. Unogona kuenda nayo kumba kweshamwari dzako kuti utarise chitsauko chekupedzisira cheMutambo weZvigaro zvoumambo, tamba mitambo yemavhidhiyo echikoro chekare paTV kana kuona akatevedzana kana bhaisikopo raunonzwa kuda panguva iyoyo.
Zvese zvaunoda i tablet yekutamba uye zvikumbiro uye zvishongedzo zvakakodzera. Chii chimwe, yakanakira kana uine zvishuwo izvi panhandare yendege kana iwe usipo pamba, pasina terevhizheni. Uye kana iwe uri chaizvo mumitambo yekare yevhidhiyo yechikoro, unogona zvakare kuishandura kuita mini retro cabinet.
Ona mahwendefa ekutamba
Iyo inozivikanwa "yezvose" mudziyo
Kuve nehwendefa rakarara rakatenderedza semudziyo wekushandisa chero chinhu - kubva nekukurumidza kutarisa email, kuverenga pawebhu, kana kuuraya nguva nemitambo yemavhidhiyo - zvinoita senge muenzaniso wakanaka wezvekushandisa piritsi. Inokurumidza uye iri nyore pane kutora laptop yako kana kuenda kuPC uye haina kuwanikwa munzvimbo imwechete.
Kune kunyange Mahwendefa evana vemazera ose.
Nekudaro, mahwendefa mazhinji haanyatso kukweretesa kune akawanda-mushandisi ruzivo. Sezvineiwo, takawana dzimwe nzira dzakatenderedza dambudziko iroro, saka unogona kushandisa piritsi rako se "mwero-inokodzera-zvese" mudziyo wemhuri yese. Uye nekuda kwemamwe "tablet chiteshi", hauzombopotsa.
Indaneti inokanganisa. Pakati pemapuratifomu akaita seFacebook, Twitter, uye kunyange, (ngatitarisane nazvo) Pinterest, zvakaoma kuramba wakatarisana nesarudzo dzakawanda dzekuverengera. Mamwe mabloggi ane mazita makuru inokurudzira kutarisa zvese zvinokanganisa pahwendefa uye pedza nguva yakati pakarenda yako kuti uvachengete vakaparadzana nebasa rako.
Tinokurudzira iyo mahwendefa emhando yepamusoro-mutengo Nokuda kweizvi.
Chishandiso chebasa chisina kuvhiringidza
Kune rimwe divi remari imwe chete, mahwendefa zvakare akanakira kutarisa pane rimwe basa - kunyanya sezvo usingakwanise kuvhura akawanda maapplication kamwechete. Izvo zvinovaita chishandiso chakanakira kunyora-yemahara kunyora uye saka a zvinoshamisa kugadzira chishandiso. Iwo zvakare akakura (zviri pachena) ekuverenga-yemahara kuverenga. Kutaura idi, apo takabvunza vana kana vaishandisa tablet yavo kushanda, voruzhinji vakati hungu nokuda kwezvikonzero zvimwe chetezvo.
Pane piritsi yerudzi rwese rwemushandisi
Kune mapiritsi yakakosha kuvana. Vane chigadziro chinonakidza chevana vaduku, ivo vaduku uye zvikamu zvavo zvemukati zvinowedzera kungwara. Izvo zvakare zvakachipa, chimwe chinhu chinonzwisisika kana tikafunga kuti tiri kutaura nezvemidziyo ine simba shoma. Mukuwedzera, vanowanzoshandisa Android operating system yakagadzirirwa vana, zvinoreva kuti vane hutungamiri hwevabereki uye, pakutanga, zvinonyanya kuoma kushandisa mamwe marudzi ezvinyorwa.
Ona mapiritsi evana
Kune zvakawanda zvekutaura nezve mahwendefa evadzidzi, asi ini pachangu handibvumi kuti izvi zviripo. Tafura yevadzidzi haisi chinhu chinopfuura piritsi rakajairika iro mudzidzi anogona kutenga. Nemamwe mashoko, a economic tablet kuti vechidiki ava vanokwanisa kutenga pasina kutengera vana tablet. Iwo mamodheru akakosha, asi pasina zvirambidzo zvinovadzivisa kuita chero chinhu.
Kune zvakare mahwendefa ehunyanzvi. Tafura yehunyanzvi pachayo ndiyo inokodzera chete kushandiswa kwehunyanzvi. Kune akawanda muchikamu chemifananidzo. Kune rumwe rutivi, kune mahwendefa atinogona kushandisa kushandiswa kwenyanzvi, ayo ari mapiritsi epamusoro-soro. Mamwe acho anodhura zvakanyanya, asi anogona kushandiswa kugadzira kana kunyora.
Kazhinji, mahwendefa ehunyanzvi kana "PRO". zvinhu zvakawanda zviripo (inotengeswa zvakasiyana) saka tinogona kuita chero chinhu navo. Pakati pezvishandiso izvi pane zvivharo / keyboard iyo inoshandura piritsi redu kuita rudzi rwekutsiva komputa uko musiyano mukuru uchave wekushandisa sisitimu uye mashandisiro ayo. Kune rimwe divi, ivo zvakare vane zvimwe zvishongedzo zviripo senge stylus ine low latency zvekuti kudhirowa ndicho chinhu chiri padyo kuita pabepa.
Ona mapiritsi epamusoro-soro
Musiyano pakati petablet nelaptop
Chii chinosiyanisa piritsi kubva pakombuta? Zvimwe zvinhu zvakadai sezvinotevera:
Kukura. Tafura kazhinji ine diki skrini uye kazhinji haisanganisire keyboard. Izvi zvinoita kuti vagone kurongeka.
Zvimwe zvikamu zvemukati. Mamwe mahwendefa ane processors ane simba kwazvo, padyo neaya emakomputa, asi, kazhinji, iyo RAM uye hard disk kana ndangariro yekuchengeta zvakanyanya kungwara. Iyo RAM yakakwana kuitira kuti iwe ugone kufambisa iyo inonyanya kufarirwa maapplication pasina kutambura zvakanyanya uye hard disk zvinoenderana nekushandisa kwedu. Kune mamwe ane 8GB chete yekuchengetedza, asi kune mamwe ekushandisa nehunyanzvi kana vashandisi vanonyanya kuda vanogona kusvika kusvika 512GB.
Iyo inoshanda sisitimu uye maapplication ayo: Makomputa anoshandisa desktop inoshanda masisitimu, akadai seWindows, macOS, kana imwe yeasiyana Linux kugovera, asi mahwendefa anoshandisa nhare inoshanda sisitimu. Izvi zvinosanganisira sisitimu uye chitoro cheapp, seGoogle Play kana App Store.
Kutaura pamusoro pemaitiro ekushanda, mahwendefa haagoni kuchinjwa maitiro ekushanda pasina ruzivo rwakawanda pedyo neaya ehacker, nepo makombiyuta anogona kuisa Windows neLinux pasina kuputsa ziya.
Mahwendefa haawanzo sanganisira keyboard. Chishandiso cheBluetooth chinogona kuwedzerwa kune chero piritsi, asi mahwendefa, vhezheni yavo yepamusoro uye mashandisiro akanakisa atinogona kuita kubva kwavari, enda usina kiibhodhi.
Mahwendefa ane masensa uye mamwe mahardware asingasanganisirwe nemakomputa. Kunyangwe izvi zvichizoenderanawo neiyo modhi, mahwendefa anogona kunge aine mamwe ma sensor akajairika senge accelerometer uye mamwe asina kujairika senge GPS, 4G uye nharaunda sensor. Nadzo, tinogona kushandisa piritsi seGPS navigator, kufona, chero isu tichishandisa software yakagadzirirwa iyo, kana kubatana neinternet chero kupi zvako pasi rose nenharembozha. Kune malaptops ane 4G, asi haawanzo, uye haasi iwo ane accelerometer.
Screen yemhandoKunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti kune malaptops ane skrini yakanaka kwazvo, mahwendefa anowanzo kuve neiri nani skrini, inopenya uye inopa mamwe mavara akajeka.
Mhedziso, tablet ndeyei?
Muchidimbu, uye kuti wakakwanisa sei kuverenga mukati mese chinyorwa, piritsi, chero iyo inoshanda sisitimu, inogona kuve Chishandiso chinonyanya kukosha chebasa rako uye nekutandara kwako.
Nezvishandiso zvakakodzera uye maapplication ichatsiva kana kuzadzisa nenzira inoshanda uye inokwanisika kune zvishandiso senge laptop yako, PC, imba bhaisikopo, koni, stereo nezvimwe. vachisvika kwavasingaendi.
Hachisi chokwadi here kuti hauchashaya kuti tablet ndeyei?
Mahwendefa akadhura » Inotungamirira » Chii chinonzi tablet?